कालताल जहाँ हरेक बिहान मनास्लुले पौडी खेल्छ :: Setopati
कालताल जहाँ हरेक बिहान मनास्लुले पौडी खेल्छ
सेतोपाटी संवाददाता गोरखा, जेठ ९
उत्तरी गोरखाको कालतालमा श्रृङ्गी हिमालको छायाँ।
प्रोक गाउँको शिरमा रहेको कालताल प्राकृतिक हिसाबले निकै मनमोहक छ। गाउँलेहरू यसलाई साक्षात देवीको प्रतीक मानेर रुपमा पूजा गर्छन्। हिँडेर तालको फन्को मार्न डेढ घण्टा लाग्छ। यसकै किनारबाट उकालो चढेर हिमालचुली बेसक्याम्प भएर नामरुङ पुग्न दुई दिन लाग्छ। मनास्लुको वैकल्पिक पदमार्गका रुपमा यसको विकास गरिँदैछ।
उत्तरी गोरखामा थुप्रै ताल छन्। ती मध्ये एउटा युनिक ताल हो–कालताल जहाँ हरेक बिहान मनास्लु हिमालले पौडी खेल्छ। तालको पश्चिमपट्टि पहरा दिइरहेको मनास्लुको दायाँबायाँ अरु हिमचुली पनि छन्। तिनीहरू पनि मनास्लुसँगै पौडीमा रमाउँछन्।
प्राचीनकालदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ। यसरी गोरखा जिल्लाको चुमनुब्रि गाउँपालिका–४, प्रोक गाउँको शिरमा एउटा रमणीय उपत्यका छ। यसको समथलीमा पानी जमेर ताल बनेको छ। ताल वरपर गुराँस, भोजपत्र र धुपिको जंगल छ। तालको पूर्वपट्टि श्रृङ्गी र गणेश हिमाल मुस्कुराउँछन्।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)काअनुसार तालको क्षेत्रफल २२ दशमलव ३ हेक्टर छ। ताल पूर्वपश्चिम लाम्चो आकार छ भने उत्तरदक्षिण फराकिलो। हिँडेर तालको फन्को मार्न डेढ घण्टा लाग्छ।
उत्तरी गोरखाको कालतालमा मनास्लु हिमालको छायाँ
भोटे भाषाको ‘काल्पा’को अर्थ युगौंदेखि र ‘छों’को अर्थ ताल। तालको बेस क्याम्प प्रोक गाउँ (२३८० मिटर)सहित वरपरका गाउँले कालताललाई शक्तिकी प्रतीक देवी मान्छन्। ‘प्रोक कालताल नोर्बु होमस्टे’ प्रोकका सञ्चालक नोर्बु साम्डुक लामा भन्छन्, ‘जेठको औंसीमा पूजा हुन्छ। नवमीमा तालमा आइपुग्ने, भोलिपल्ट पूजा गरेर तालको कोरा गर्ने र पर्सिपल्ट फर्कने चलन छ।’
पूजा गर्दा तोर्मा बनाएर काठमा राखिन्छ। त्यसमा खादा र पैसा राखेर तालमा बगाउने चलन छ। ताल किनारामै बसेर तोर्मा बनाउने, पूजा गर्ने र बगाउने गरिन्छ। यसरी पूजापाठ गरेमा अन्नबाली राम्रो हुने, रोगव्याधी नलाग्ने, आयु लामो हुने, मान्छे र जनावरको संरक्षण हुने विश्वास छ ।
पवित्र भूमि भएकाले तालमा पौडी खेल्न, ढुङ्गा फ्याँक्न, हल्ला गर्न र फोहोर गर्न पाइँदैन। त्यसैले गाउँ बाहिरका मान्छे ताल घुम्न जाँदा प्रोकबाट अनिवार्य लोकल गाइड लिएर जानुपर्छ।
ताल क्षेत्रमा काटमार गर्न पाइँदैन। यहाँको जंगलमा झारल, डाँफे, काग, हिउँचितुवा र भालुलगायत जनाबर डुल्छन्।
तालमा नुन खानी भएको जनविश्वास छ। नुनका विषयमा गाउँलेहरू विभिन्न कथा सुनाउँछन्।
तालको पुर्वपट्टि किनारमा एउटा गुम्बा छ। गुम्बा निर्माण समितिका अध्यक्ष ज्यामयाङ् दोर्जे लामाकाअनुसार वि.सं. २०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएको गुम्बा पुननिर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
मनास्लु पदमार्गसँग जोडिएका डयाङ र प्रोक गाउँको शिर हो कालताल। यहाँ कमै पर्यटक पुग्छन्। मनास्लु पदमार्गलाई मोटर बाटोले छोट्टयाउँदै गएकाले स्थानीयले वैकल्पिक पदमार्गका रुपमा कालताललाई ब्राण्डिङ गरिरहेका छन्।
प्रोक गाउँका अगुवाहरू।
कालतालबाट हिमालचुली बेसक्याम्प हुँदै नामरुङ गाउँ पुग्ने पदमार्ग ३३ किलोमिटर लामो भएको नुब्री सांस्कृतिक युवा उत्थान समितिका अध्यक्ष एवं मनास्लुका पर्यटन अभियन्ता लाक्पा ढुण्डुप लामा बताउँछन्। तालबाट दुई दिनमा नामरुङ पुगिन्छ। बीचमा खाने÷बस्ने कुनै होटल तथा बस्ती छैन। त्यसैले क्याम्पिङ गर्नुपर्छ।
त्यसो त कालतालमा पनि होटल तथा लज छैनन्। तालको पूर्वपट्टि बनाइएको धर्मशालमा खाना पकाउने भाँडावर्तन र ओढ्ने कम्बलको व्यवस्था छ। प्रोक गाउँका अगुवालाई सम्पर्क गरेर स्थानीय गाइडसहित खाद्यान्न लिएर उकालो लाग्दा धर्मशालामा बास बस्न सजिलो हुन्छ।
प्रोक गाउँकी अगुवा महिला।
प्रोकबाट तालसम्मको दूरी करिब ९ किलोमिटर मात्र हो। उकालो बाटो भएकाले हिँड्न ५ घण्टा लाग्छ। तालमा अर्को एउटा व्यवस्थित धर्मशाला बनाउने योजनामा छन् चुमनुब्रि गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पेमा ढुण्डुप लामा। अहिले प्रोक गाउँमा तीन वटा होमस्टे सञ्चालित छन्।
अन्त्यमा, कोरोना भाइरस शान्त भएपछि कालतालको यात्रामा निस्कने कि ?
काठमाडौंबाट निस्केको चौंथो दिनमा कालतालमा पुगेर बास बस्न सकिन्छ। काठमाडौंबाट गोरखाको सोंतीखोलासम्म सार्बजनिक बस चल्छ। सोतीखोलादेखि माछीखोलासम्म जिप चल्छन्। त्यसैले काठमाडौंबाट निस्केको पहिलो दिन माछीखोलामा पुग्न सकिन्छ। माछीखोलाबाट पदयात्रा सुरु हुन्छ। पहिलो बास जगत र दोस्रो बास कालतालको बेस क्याम्प प्रोक गाउँमा। अर्को दिनको बास कालतालमा।
पेमा ढुण्डुप लामा,वडाध्यक्ष, चुमनुब्रि गाउँपालिका–४
कालताल पवित्र भूमि हो। मनास्लु पदयात्रा गर्ने केही विदेशीहरू कालतालसम्म पुग्ने गरेका छन्। प्रोक गाउँबाट कालताल हुँदै हिमालचुली बेस क्याम्प भएर नामरुङ जोड्ने पदमार्ग बनाउने काम गरिरहेका छौं। मोटर बाटोले पुरानो पदमार्ग मासिँदै जाँदा यसलाई वैकल्पिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो तालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खाले पर्यटक रमाउन सक्छन्। हामीले कालतालको प्रचार गर्न महोत्सव गर्ने योजना बनाएका थियौं। कोरोना भाइरसका कारण पोहोर महोत्सव गर्न सकेनौं। अब कोरोना शान्त भएपछि महोत्सव गर्नेछौं। प्रचारप्रसारका सामाग्री उत्पादनमा पनि जोड दिन्छौं।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ९, २०७८, १८:०८:००